မနာလိုသူ တွေရဲ့ တရားလွန်ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက် Girl Idol တွေရဲ့ သဘောထားနဲ့တုန့်ပြန်ချက်အချို့ | News Bar Myanmar
မနာလိုသူ တွေရဲ့ တရားလွန်ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက် Girl Idol တွေရဲ့ သဘောထားနဲ့တုန့်ပြန်ချက်အချို့
Kpop idol တွေရဲ့ဘဝကတော့ အလုပ်ကလဲပင်ပန်းတာတစ်မျိုး ပုံရိပ်ကိုထိန်းရတာကြောင့် ကိုယ့်ကိုဝေဖန်ဆဲဆိုနေသူတွေကို အပြုံးမပျက်တုန့်ပြန်ဖို့ကြိုးစားရတာကတစ်မျိုးနဲ့ အတော်လေးကို စိတ်ပင်ပန်းရမှာပါ။ ဒီ girl idol တွေကတော့ မနာလိုသူ တွေအတွက် စိတ်ထဲမှာလုံးဝနေရာမပေးပဲ အထာကျကျချေပစ်လိုက်တာပါ။ သူတို့ရဲ့ unique ဖြစ်တဲ့စကားတွေကတော့…
အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့ comment တွေအပေါ် ဘယ်လိုသဘောရလဲလို့ အမေးခံရတဲ့အခါမှာ Seolhyun က ‘ပထမတော့ ကျွန်မကိုအသားညိုလို့ပြောကြတယ် အဲ့ဒီအတွက်မိတ်ကပ်ကိုဖြူအောင်လိမ်းပြန်တော့လဲ မိတ်ကပ်ဖြူလို့ပြောကြပြန်တယ်၊ အစကတော့ စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့ နောက်တော့ကျွန်မလူတိုင်းကျေနပ်တော့ မနေပေးနိုင်ဘူးဆိုတာ သိသွားလို့ သိပ်ဂရုမစိုက်ဖြစ်တော့ဘူး ကျွန်မလုပ်စရာရှိတဲ့တာဝန်တွေကိုပဲ အကောင်းဆုံးလုပ်တော့တယ်’ လို့ သူ့ရဲ့ သဘောထားကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Anti-fan တစ်ယောက်ဟာ Suzy ကို twitter ပေါ်မှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးပါျစလို့တောင် ကျိန်စာတိုက်ခဲ့တာပါ။ လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို လောကထဲကပျောက်ကွယ်သွားစေချင်တဲ့အထိ မုန်းနေတယ်ဆိုတာ ခြောက်ခြားစရာကိစ္စပေမယ့် Suzy ကတော့ သွေးအေးအေးပဲတုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုကျိန်စာတိုက်ထားတဲ့ tweet ကို ‘အာ ကျွန်မသေသွားရင် ကောင်းမယ်ပေါ့နော်’ လို့ သွား reply ခဲ့တာပါ။
Apink အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ Naeun ကိုလဲ hater တစ်ယောက်က instagram မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေပါတိုက်ခိုက်ပြီး မကြားဝံ့မနာသာအခေါ်ဝေါ်တွေ ခေါ်ခဲ့တဲ့အပြင် သူ့ရဲ့အမေနဲ့ညီမလေးကိုပါ စော်ကားမော်ကားတွေပြောခဲ့တာပါ။Naeun ဟာ လျစ်လျူမရှုနိုင်တော့တဲ့အဆုံး ‘အခုလိုကျွန်မမိသားစုကို ဆဲလိုက်ရတော့ နေလို့ကောင်းသွားလား? ကျွန်မကိုမုန်းရင်ကျွန်မကိုပြောပါ။ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့စကားတွေကို တော်ပါတော့’ လို့ပြန်ရေးပြီး တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။
Sistar အဖွဲ့ရဲ့ Dasom ဟာလဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို စည်းလွတ်ဘောင်လွတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ message တွေကို ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။ ဆဲဆိုမှုတွေအတွက် စိတ်ဆင်းရဲနေမယ့်အစား သူ့ရဲ့ပညာသားပါပါတုန့်ပြန်ချက်ကတော့ တကယ်ထိရောက်ပါတယ်။ ‘သနားစရာဘဝလေး ဘယ်လောက်များစိတ်ဒဏ်ရာတွေ များနေလို့ ဒီလို message အထိ ပို့တာပါလိမ့်? ရှင့်ရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ ဘဝလေးအတွက်လဲ ဆုတောင်းပေးပါ့မယ်’ ဆိုပြီး အနိုင်နဲ့ပိုင်းလိုက်တာပါ။ တစ်ဖက်က မနာလိုသူ ကတော့ အနာကိုဆားနဲ့ဖြူးသလို ခံစားသွားရမှာ အသေအချာပါ။
IU ကတော့ တော်ရုံတန်ရုံ comments တွေကို အာရုံစိုက်လေ့မရှိပေမယ့် အရမ်းများပြီး တရားလွန်လာတဲ့အခါမှာ အားလုံးကိုခြွင်းချက်မရှိ တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။ အဲ့လိုတရားစွဲဆိုလို့ တောင်းပန်စာရေးရတဲ့အခါမှာတောင် အချို့က ‘IU ကြောင့် သူ့မိဘတွေကွာရှင်းတော့မလိုဖြစ်နေပြီ’ လို့ အပြစ်တင်စကားတွေ ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာတော့ IU က ‘ဒါကဘာလဲ ငါကအပြစ်သားလား’ လို့တွေးမိပေမယ့် လုပ်စရာရှိတာတော့ ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အရွယ်ငယ်ပေမယ့် ရင့်ကျက်တဲ့ Gugudan’s Sejeong ရဲ့ haters တွေအပေါ်သဘောထားကတော့ လေးစားလောက်စရာပါပဲ။ ‘ comments တွေက ကင်မ်ချီထဲမှာပါတဲ့ ဂျင်းလိုပဲ။ Kimchi စားကောင်းနေပြီဆိုရင် ဂျင်းဝါးမိတဲ့အရသာလိုမျိုးပဲ။ မကောင်းဘူး ဒါပေမယ့် မပါမဖြစ်ပါဝင်ပစ္စည်းပဲလေ။ comments တွေကလဲ အဲ့လိုပဲ ကျွန်မကြုံကိုကြုံရမယ့် အခက်အခဲတွေမို့ ဒီလိုပဲလက်ခံလိုက်တယ်’ လို ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
Next နာမည်ကျော်မဟုတ်သူတွေနဲ့တွဲတာကြောင့် ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များ »
Previous « Kim Jong Un ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်အားပေးခဲ့ဖူးတဲ့ တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်အဖွဲ့
Luhan ဟာ comeback လုပ်ဖို့ အရိပ်အမြွက်တွေ စတင်ပေးနေခဲ့တာလား
သားသမီးတွေရှိလာရင် Idol ဖြစ်လာဖို့အားပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ Lay Zhang
ARMY တို့ အတွက် Surprise အကြီးကြီး ရှိနေတဲ့ BTS